1 Kumkani 11 | IBhayibhile Kwi-Intanethi | INguqulelo Yehlabathi Elitsha
1 Kumkani 11:1-43
11 UKumkani uSolomon wayethanda abafazi basemzini+ abaninzi kunye nentombi kaFaro,+ amaMowabhikazi,+ ama-Amonikazi,+ amaEdomikazi,+ amaSidonikazi+ namaHitikazi,+ 2 kwiintlanga awayethe ngazo uYehova koonyana bakaSirayeli: “Ningangeni phakathi kwazo,+ nazo zingangeni phakathi kwenu; eneneni ziya kwenza intliziyo yenu ityekele ekulandeleni oothixo bazo.”+ USolomon wanamathela+ kubo wabathanda. 3 Yaye waba nabafazi abangamakhulu asixhenxe, amakhosazana, namashweshwe angamakhulu amathathu; kwaye abafazi bakhe bayityekisa+ intliziyo yakhe. 4 Kwathi ngexesha lokuba mdala+ kukaSolomon abafazi bakhe bayenza intliziyo yakhe yatyekela+ ekulandeleni abanye oothixo;+ kwaye intliziyo yakhe ayizange iphelele+ kuYehova uThixo wakhe njengentliziyo kaDavide uyise. 5 Kwaye uSolomon waqalisa ukulandela uAshtoreti+ uthixokazi wamaSidon noMilkom+ into elizothe yama-Amoni. 6 Yaye uSolomon waqalisa ukwenza okubi+ emehlweni kaYehova, akamlandela ngokupheleleyo uYehova njengoDavide uyise.+ 7 Kungoko awathi uSolomon wamakhela indawo ephakamileyo+ uKemoshe+ into elizothe+ yakwaMowabhi kwintaba+ eyayiphambi+ kweYerusalem, noMoleki into elizothe yoonyana baka-Amoni. 8 Yaye leyo yindlela awenza ngayo kubo bonke abafazi bakhe basemzini+ ababeqhumisa umbingelelo kwaye bebingelela koothixo babo.+ 9 UYehova waba nomsindo+ kuSolomon, ngenxa yokuba intliziyo yakhe yemka kuYehova uTHIXO kaSirayeli,+ lowo wayebonakele kabini kuye.+ 10 Kwaye ngokuphathelele le nto wamyalela ukuba angalandeli abanye oothixo;+ kodwa akazange akugcine oko uYehova wayemyalele kona. 11 UYehova wathi kuSolomon: “Ngenxa yokuba oku kwenzekile kuwe yaye ungawugcinanga umnqophiso wam nemimiselo yam endakuyalela yona, ndiya kubukrazula ubukumkani kuwe, ndibunike umkhonzi wakho.+ 12 Noko ke, andiyi kukwenza ngemihla yakho,+ ngenxa kaDavide uyihlo.+ Ndiya kubukrazula esandleni sonyana wakho.+ 13 Kuphela nje andiyi kubukrazula bonke ubukumkani.+ Esinye isizwe ndiya kusinika unyana wakho, ngenxa kaDavide umkhonzi wam+ nangenxa yeYerusalem endiyinyulileyo.”+ 14 Kwaye uYehova wamvelisela umchasi+ uSolomon,+ ongulo, uHadadi umEdom wenzala kakumkani. WayekwaEdom.+ 15 Yaye kwathi ekuxabeleni kukaDavide uEdom,+ xa uYowabhi owayeyintloko yomkhosi wenyukayo ukuza kungcwaba abo babebulewe, wazama ukuxabela yonke into eyindoda kwaEdom.+ 16 (Kuba uYowabhi nawo onke amaSirayeli bahlala apho iinyanga ezintandathu de baxabela yonke into eyindoda kwaEdom.) 17 Yaye uHadadi wabaleka wemka, yena namanye amadoda akwaEdom angabakhonzi bakayise ekunye naye, baya eYiputa, ngoxa uHadadi wayeseyinkwenkwana. 18 Ngoko besuka kwaMidiyan+ beza eParan, bathabatha amadoda eParan+ beza eYiputa kuFaro ukumkani waseYiputa, owamnika indlu. Kwakhona, wamabela isonka, waza wamnika umhlaba. 19 Yaye uHadadi waqhubeka efumana ubabalo+ emehlweni kaFaro, kangangokuba wamnika umfazi,+ udade bomfazi wakhe, udade boTapenesi inenekazi. 20 Ekuhambeni kwexesha udade boTapenesi wamzalela uGenubhati unyana wakhe, yaye uTapenesi wamlumlela+ kanye phakathi endlwini kaFaro; kwaye uGenubhati waqhubeka esendlwini kaFaro phakathi koonyana bakaFaro. 21 UHadadi weva eseYiputa ukuba uDavide ulele kookhokho bakhe+ nokuba uYowabhi oyintloko yomkhosi ufile.+ Ngoko uHadadi wathi kuFaro: “Ndindulule,+ ukuze ndihambe ndiye kwilizwe lakowethu.” 22 Kodwa uFaro wathi kuye: “Yintoni na oyisweleyo ngoxa ukunye nam le nto ufuna ukuya kwilizwe lakowenu?” Ke yena wathi: “Nento le; kodwa nakanjani na ndindulule.” 23 Waza uThixo wamvelisela omnye umchasi,+ uRezon unyana kaEliyada, owayebaleke kuHadadezere+ ukumkani waseTsobha+ inkosi yakhe. 24 Yaye waqhubeka eqokelelela amadoda ecaleni lakhe waza waba yintloko yamatutu, ekubulaweni kwawo nguDavide.+ Ngoko baya eDamasko+ baya kuhlala khona baza balawula eDamasko. 25 Kwaye waba ngumchasi kaSirayeli yonke imihla kaSolomon,+ oko kwakuhambisana nobubi obenziwa nguHadadi; yaye wamenyanya+ uSirayeli ngoxa wayeqhubeka elawula eSiriya. 26 Kwakukho uYerobhoham+ unyana kaNebhati umEfrayim waseTsereda, umkhonzi kaSolomon,+ yaye igama likanina lalinguTseruwa, umfazi ongumhlolokazi. Naye waqalisa ukuphakamisa isandla sakhe nxamnye nokumkani.+ 27 Yaye nasi isizathu esambangela ukuba aphakamise isandla sakhe nxamnye nokumkani: USolomon wayakhe iSiganga.+ Wayelivalile ithuba lesiXeko sikaDavide uyise.+ 28 Ke kaloku le ndoda inguYerobhoham yayilikroti elinamandla.+ Xa uSolomon wabonayo ukuba lo mfana wayengumsebénzi okhutheleyo,+ wamenza umveleli+ wayo yonke inkonzo yesinyanzelo+ yendlu kaYosefu.+ 29 Kwathi ngelo xesha uYerobhoham waphuma waya eYerusalem, yaye uAhiya+ umShilo+ ongumprofeti wamfumana endleleni, yaye uAhiya wayezigqume ngesambatho esitsha; kwaye babebobabini entsimini. 30 UAhiya wasibamba isambatho esitsha esasikuye wasikrazula+ saba ziziqwenga ezilishumi elinesibini.+ 31 Yaye wahlabela mgama wathi kuYerobhoham: “Zithabathele iziqwenga ezilishumi; kuba utshilo uYehova uTHIXO kaSirayeli ukuthi, ‘Ndiyabukrazula ubukumkani esandleni sikaSolomon, kwaye ngokuqinisekileyo ndiya kukunika izizwe ezilishumi.+ 32 Yaye isizwe esinye+ siya kuqhubeka sisesakhe ngenxa yomkhonzi wam uDavide+ nangenxa yeYerusalem,+ isixeko endisinyulileyo kuzo zonke izizwe zakwaSirayeli. 33 Isizathu sikukuba baye bandishiya+ baza baqubuda kuAshtoreti+ uthixokazi wamaSidon, kuKemoshe+ uthixo wakwaMowabhi nakuMalkom+ uthixo woonyana baka-Amoni; kwaye abakhange bahambe ezindleleni zam ngokwenza oko kulungileyo emehlweni am nakwimimiselo yam nakwizigwebo zam njengoDavide uyise. 34 Kodwa andiyi kuthabatha ubukumkani buphela esandleni sakhe, ngenxa yokuba ndiya kumbeka ukuba abe sisikhulu yonke imihla yobomi bakhe,+ ngenxa kaDavide umkhonzi wam endamnyulayo, ngenxa yokuba wayigcina imiyalelo yam nemimiselo yam. 35 Yaye ngokuqinisekileyo ndiya kubuthabatha ubukumkani esandleni sonyana wakhe ndibunike wena, ewe, izizwe ezilishumi elinesibini.+ 36 Kwaye unyana wakhe ndiya kumnika isizwe esinye, ukuze uDavide umkhonzi wam aqhubeke enesibane lonke ixesha phambi kwam eYerusalem,+ isixeko endizinyulele sona ukuba ndibeke igama lam apho.+ 37 Nguwe endiya kumthabatha, yaye uya kulawula konke oko kunqwenelwa ngumphefumlo wakho,+ kwaye ngokuqinisekileyo uya kuba ngukumkani kwaSirayeli. 38 Yaye ukuba uthobela konke oko ndiya kukuyalela kona, uze uhambe ezindleleni zam wenze oko kulungileyo emehlweni am ngokugcina imimiselo yam nemiyalelo yam, kanye njengoko uDavide umkhonzi wam wenzayo,+ nam ndiya kuba nawe,+ kwaye ndiya kukwakhela indlu ehlala ihleli, kanye njengoko ndamakhelayo uDavide,+ yaye ndiya kukunika uSirayeli. 39 Kwaye ndiya kuyithoba inzala kaDavide ngenxa yoku,+ kodwa andiyi kusoloko ndisenjenjalo.’”+ 40 USolomon wafuna ukumbulala uYerobhoham.+ Ngoko uYerobhoham wabaleka+ waya eYiputa kuShishaki+ ukumkani waseYiputa, yaye wahlala apho eYiputa de wafa uSolomon. 41 Ke eminye imicimbi kaSolomon nako konke awakwenzayo nobulumko bakhe, akubhalwanga na encwadini yemicimbi kaSolomon? 42 Yaye imihla awalawula ngayo uSolomon eYerusalem uSirayeli wonke yaba yiminyaka engamashumi amane.+ 43 Wandula ke uSolomon walala kookhokho bakhe,+ waza wangcwatyelwa kwisiXeko sikaDavide uyise;+ waza uRehobhoham+ unyana wakhe walawula esikhundleni sakhe.
1 Kumkani 11